यी कुराहरू पानीसँग मिसाएर पिउने गर्नुस्, पेट दुखेको ठीक हुन्छ! जानकारीको लागि सबैले सेयर गर्नुहोस | सुदुरपश्चिम खबर
ब्यस्त जीवनशैली, गलत खानपिन र तनावका कारण पेट ख राब हुन थाल्छ । यसको ख राब असर हाम्रो पाचनप्रणालीमा पर्छ ।यो सम स्याबाट मुक्तिका लागि घरेलु उपाय नै भेटिन्छन् । दिनदिनै यी उपाय अपनाएर पाचनप्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ ।
दुई गिलास पानीमा दुई चम्चा धनियाँको धूलो मिसाउनुस् ।अब त्यसमा आधी चम्चा सुकेको अदुवाको धूलो हाल्नुस् ।यो घोललाई मधुरो आगोमा पाँच मिनेटसम्म तताएर काँढा बनाउनुस् ।तयार भएको काँढाको चार चार चम्चा बिहान र बेलुका पिउनुस् । पेट ठीक हुन्छ ।हरीतकी वा हरडको धूलो बिहानबेलुका महसँग लिने गर्नुस् ।
आधी आधी चम्चा ठूलो अलैंचीको धूलो र मिश्री मिसाएर बिहानबेलुका खाने गर्नुस् ।दिनदिनै दुई चम्चा कागतीको रसमा तीन चिम्टी जाइफलको धूलो मिसाएर पिउनुस् ।एक कप पानीमा एक एक चम्चा जीरा र सूप हालेर उमाल्नुस् । मनतातो भएपछि पिउनुस् ।
दिनदिनै हींगको पानीमा कपडा भिजाएर नाइटोमा १५ देखि ३० मिनेट राख्नुस् ।एक चौथाइ चम्चा सुकेको अदुवाको धूलो, एक चम्चा सूप र आधी चम्चा मिश्री मिसाएर दिनदिनै बिहान बेलुका खानुस् ।दिनमा चारचोटि एक गिलास मनतातो पानी पिउनुस् ।
यो पनि ःअमेरिकामा २९ वर्षीय अश्वेत जेकब ब्लेकमाथि गो ली चलाएपछि सरकार विरो धी प्रद र्शन च र्कि एको छ । पछिल्लो प्रदर्शनमा यसअघि मा रिए का अफ्रिकी अमेरिकी मुलका जर्ज फ्लोइडका आफन्तहरुले समेत साथ दिएका छन् ।
जर्ज फ्लोइडका बहिनी ब्रिदगेटले प्रहरी ज्या दती का कारण आफ्ना दाजुको ज्यान गएको भन्दै प्रहरी द म नवि रुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेकी छिन् । वासिङटनमा भएको प्र द र्श नलाई सम्बोधन गर्दै उनले आ न्दो लन नरोक्न समेत सुझाव दिइन् ।
गो ली चलाएको घट नापछि मिल्वाकी र सिकागोको बीचमा रहेको केनोशामा हिं सा त्म क प्र दर्श न भएको छ । क र्फ्यू जारी गरिएपनि प्र द र्शन कारीले त्यसको उ ल्लं घन गरेका छन् । आइतबार ब्लेकलाई उनको परिवारको सामुन्ने प्रहरीले गो ली हालेको थियो । ढाडमा सातवटा गो ली लागेका उनको अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ः शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । र, शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ ।ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसको कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ ।
शनिवारको दिन केही काम गर्न वर्जित गरिएको छ ः१ .आपँको अचार खानबाट बच्नुहोस् । काँचो आँप अमिलो हुन्छ र शनि देव यस्तो चिजको विरोधी हुन् । शनिवारका दिन रातो खुर्सानी नखानुहोस् । त्यसको सट्टा कालो या हरियो खुर्सानिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
२. शनिवारको दिन रक्सी पिउनाले कुन्डलीमा शुभ शनि हुँदा हुँदै पनि शनिको शुभ फल प्राप्त हुँदैन । शनिवारको दिन दुध या दही सेवन गर्दा त्यसमा वेसार वा सख्खर राखेर पिउनु पर्छ ।३ .शनिवारको दिन घरमा फलाम या फलामबाट बनेका बस्तु ल्याउन हुँदैन । नुनको खरिद पनि शनिवार बर्जित गरिएको छ । उक्त दिन नून किन्दा घरमा दरिद्रता भित्रन्छ ।
४. काठबाट बनेका सामान पनि शनिवार किन्न अशुभ मानिन्छ । शनिवार सर्सिउको तेल दानको महत्व छ तर त्यस दिन किन्न हुँदैन ।५शनिवारको दिन कालो रंगको लुगा या जुत्ता किन्न लाग्नु भएको छ भने विचार गर्नुहोस् शनिवार यस्तो वस्त्र किन्न उपयुक्त हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःनेपाल आइडल सिजन–३ को उपाधि सज्जा चौलागाईंले उचालेकी छन् । शुक्रबार नेपाल आइडलको स्टुडियोमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा सज्जाले उपाधि उचाल्दा फस्ट रनरअप प्रवीण बेडुवाल बने भने सेकेन्ड रनरअपको उपाधि किरणकुमार भुजेलले उचाले । दर्शकले विश्वभरबाट दिएको भोट र निर्णायकको मूल्यांकनका आधारमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपाल आइडलको विजेता घोषणा गरेका हुन्।
एपी वान एचडी टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको रियालिटी सो नेपाल आइडल नेपाली सांगीतिक इतिहासको सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो। प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट ३ मा सज्जा, प्रवीण र किरणकुमार पुगेका थिए। नेपाल आइडल–३ को उपाधिसहित विजेता सज्जाले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् । यसैगरी फस्ट रनरअपले १० लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गरेका छन्।
आइडलको फिनालेमा सीमित मानिस र दर्शकको उपस्थितिमा विजेता घोषणा गरिएको हो । आइडल प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेल हुन् । उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण ग्रान्ड फिनाले सामान्य तवरमै सञ्चालन गरिएको हो कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्ह्यु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन्। आइडल टिमकै एक जनामा शुक्रबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएपछि आइडल टिमको उपस्थितिमा मात्र कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
सुरुमा उनले डिजाइनर बन्ने सपना बोकेकी थिइन् तर गीतले उनलाई पछ्याइरह्यो। गायनमै अगाडि बढ्छु भन्ने त थिएन तर लाइभ गायन र नेपाल आइडलले उनलाई गायनबाट अलग हुन नसक्ने बनायो।नेपाल आइडलमा अरूले गाएको सुन्दा यत्तिको त म पनि गाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई। गायक सविन राईकी फ्यान सज्जा नेपाल आइडलले आफूलाई संगीतसँग अझ नजिक बनाएको बताउँछिन्। gnewsnepal
बैतडीमा झडप हुदाँ गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जना घाइते